Auphonic: Kwalite Audio Podcast Gị Na Otu Pịa | Martech Zone
Fraịde, Machị 17, 2017 Monday, September 4, 2017 Douglas Karr
Mgbe anyị wuru anyị Obodo Martech, anyị maara na ọ ga-aba uru maka nnukwu netwọkụ nke ndị na - agụ akwụkwọ anyị imelite na ịkekọrịta ihe ọmụma ha ga - enweta. Mgbe m dere banyere Podcast odiyo, Temitayo Osinubi akọrọ ngwá ọrụ dị ịtụnanya a na-akpọ Auphonic. Ọ gwụla ma ị bụ injinia na-ada ụda, ịmịgharị pọdkastị gị nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ. Na ndekọ ngwaọrụ dị ka Garageband adịghị nye ukwuu na ụzọ njikarịcha ngwaọrụ - nnọọ na ị maara ihe ike bụ.
Temitayo tụrụ m aka na ụzọ Auphonic, a web-based na desktọọpụ dabeere na ngwa na optimizes ma richness na olu nke gị Podcast ọdịyo. Teknụzụ nwere ike ịhazi otu egwu ebe otu ọkà okwu na-ada ụda karịa nke ọzọ. Enyere m ya ule na-agba ọsọ na otu n'ime ihe ndekọ m ma ejiri m ngwa ngwa ma zụta ngwa desktọọpụ abụọ - otu maka njikarịcha otu-egwu na nke ọzọ maka njikarịcha ọtụtụ.
Akụkụ nke akụkụ: Temitayo gbara m ajụjụ ọnụ na pọdkastị ya ma ọ bụ ezigbo oge - gee ntị ebe a.
The Ojuju Auphonic bụ onye nwere ọgụgụ isi Desktop ogbe Audio File Processor nke na-enyocha ọdịyo gị ma na-edozi ọdịiche dị n'etiti ndị ọkà okwu, n'etiti egwu na okwu na n'etiti ọtụtụ faịlụ ọdịyo iji nweta oke ụda zuru oke.
Ọ gụnyere a Ezigbo ọnụ ọgụgụ, zaa nke nkịtị Lokpụrụ Omume Uda (EBU R128, ATSC A / 85, Podcasts, Mobile, wdg) na akpaka Noise na Hum Mbelata algọridim.
Onye Auphonic Leveler bụ maka Mac OS X 10.6+ (64bit) naWindows 7+ (32bit ma ọ bụ 64bit).
Multitrack nke Auphonic
Auphonic Multitrack na-ewere otutu ntinye egwu egwu, nyocha na ịhazi ha n'otu n'otu yana ijikọ ma mepụta ngwakọta ikpeazụ na akpaghị aka. Inwetaghachi, ike nso mkpakọ, gating, mkpọtụ na hum Mbelata, crosstalk mwepụ, ducking na nzacha nwere ike etinyere na-akpaghị aka dịka nyocha nke egwu ọ bụla. A na-eji ụda olu na-eme ka ụda olu dị elu na njedebe kachasị elu na njedebe ikpeazụ.
Auphonic Multitrack bu wuru maka mmemme okwu na-achịkwa ma dị maka Mac OS X 10.6+ (64bit) na Windows 7+ (32bit ma ọ bụ 64bit).
Fọdụ n'ime nnukwu mgbanwe ndozi atụmatụ gụnyere:
Agbanwe Leveler: Onye na-emegharị ahụ na - edozi ọdịiche dị ukwuu, na - eme ka egwu niile dịwanye elu na karịa.
High Pass Myọcha: Ihe nzacha dị elu na-ewepu ọgba aghara dị ala na egwu niile.
Noise na Hum Mbelata: Ihe omume a na - ewepu ụda site na egwu, ọbụlagodi na enwere ọdịiche. Njirimara a na - ewepu hum dị ike na ndekọ.
Crossgate: Mgbe ọ bụla a na-edekọ otu ọdịyo ahụ na microphones abụọ dị iche iche, nke a na-eji naanị akara egwu. Crossgate na-arụkwa ọrụ iji kpochapụ ụda ọ bụla.
Anọ m na-eji ngwa abụọ a eme ihe ọtụtụ na ọ ghaghị ịmara na ha anaghị arụ ọrụ ebube. Enwere m hum nke dị elu na otu pọdkastị m yana, ọ dị nwute, ekwubigara ya ókè na-emeghị ka ọ belata ka m gbachara ya. Agbanyeghị, ahụrụ m ngwaọrụ a n'anya nke ukwuu ma nwee nsonaazụ dị egwu na ya ruo ugbu a! N'ihi Temitayo!
Tags: Mgbanwe Levelernjikarịcha ọdịyoEbereonye na-ebu ihe ama amaauphonic nhazi ọtụtụAzụ ahịaHigh Pass Myọchaitunes ọkwaiTunes ngwá ọrụọtụtụ iheNoise na Hum Mbelatangwa Podcasttemitayotemitayo osinubiolu ngwá ọrụ